जुआन फ्रान्सिस्को Ferrandiz। पानी परीक्षण को लेखक संग साक्षात्कार | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | 22/10/2021 12:00 | साक्षात्कार, लेखकहरू, नोभेला
फोटोग्राफी: जुआन फ्रान्सिस्को Ferrandiz, ट्विटर प्रोफाइल।
जुआन फ्रान्सिस्को फेरेन्डिज उनी जस्ता शीर्षकहरू सहितको ऐतिहासिक उपन्यासका लेखक हुन् अँध्यारो घण्टा, बुद्धिको ज्वाला वा श्रापित भूमि। यस वर्षको मार्चमा उनले अन्तिम एक सुरु गरे, पानी को फैसला। मँ साँच्चै समय र दयालु मलाई यो प्रदान गर्न को लागी कदर गर्दछु साक्षात्कार, जहाँ उनी उनको र अन्य धेरै विषयहरूको बारेमा कुरा गर्छन्।
जुआन फ्रान्सिस्को Ferrandiz। अन्तर्वार्ता
साहित्य वर्तमान: तपाईंको पछिल्लो उपन्यास शीर्षक छ पानी को फैसला। तपाइँ हामीलाई यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ र विचार कहाँ बाट आयो?
जुआन फ्रान्सिस्को फेरान्डिज: El पानीको निर्णय खाता XNUMX औं शताब्दीको किसानको जीवन जसको साथ हामी हाम्रो इतिहास को एक अप्रकाशित तर मौलिक भाग जान्नेछौं। रोमांच र रहस्य को बीच मा हामी एक अचम्मको खोज को लागी आउनेछौं: कमजोर र को लागी एक नयाँ न्याय मानव अधिकार को भ्रूण। यो थोरै ज्ञात ऐतिहासिक तथ्य हो जसले संसारलाई परिवर्तन गर्यो।
यद्यपि यी तथ्यहरू कानूनको डिग्रीमा अध्ययन गरिएको थियो, यो थियो एक लेख पढ्दै मानव अधिकारमा जब मैले यसको सम्भावना महसुस गरें। यो सबै यसरी सुरु भयो।
JFF: मलाई मेरो पहिलो उपन्यास राम्रो संग याद छ, यो थियो SandokanEmilio द्वारा सालगारी। म अझै बच्चा थिएँ र मैले मेरो शहर कोसेन्टेना को नगरपालिका पुस्तकालय बाट किताब पाएँ। इतिहास मलाई अंगालो (यो पाठकमा पहिलो क्रश थियो), तर जब हामी तेस्रो खण्डमा पुग्छौं यो ऋणमा थियो भनेर थाहा हुन्छ। तिनीहरूले पहिले नै फिर्ता गरिसकेका छन् कि भनेर हेर्न म लगभग दैनिक गएँ तर होइन। एक दिन, लाइब्रेरियनले मेरो निराशा देखेर म पर्खिरहेको बेला अर्को किताब पढ्न सुझाव दिए। तब उनले अर्को र अर्को सिफारिश गरे ... तब देखि मैले पढ्न छोडेको छैन यद्यपि म Sandokán को तेस्रो भाग फिर्ता हुन को लागी पर्खिरहेछु।
AL: र त्यो प्रमुख लेखक?
JFF: यो प्रश्न प्रायः मलाई सोधिन्छ र मलाई जवाफ दिन गाह्रो लाग्छ। वास्तवमा मसँग प्रमुख लेखक छैनठीक छ, म के बारे मा भावुक छु कि कथाहरु जुन हामीले सिर्जना गर्न सक्छौं। हाम्रो कल्पना को सीमा।
बाट TolkienaReverte, Pardo Bazán, Vázquez Figueroa, Asimov, Dumas, Umberto Eco, Conrad, Ursula K. Le Guin... तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो एक हो युग र शैली को मिश्रणठिक छ, मलाई साहित्यिक संसार, लेबल बिना, विभिन्न विधा र लेखकहरू मार्फत अन्वेषण गर्न मनपर्छ।
JFF: पक्कै पनि बास्कर्भिलेको विलियम de गुलाबको नाम। उहाँ अरु कोहि जस्तै सल्लाहकार को archetype प्रतिनिधित्व गर्दछ; ज्ञानी मानिस जसले मार्गनिर्देशन र अभिमुखीकरण गर्दछ (अन्य पात्रहरू मात्र होइन, पाठकलाई पनि)। उहाँ चरित्र को प्रकार हो कि कथा को समृद्ध गर्ने क्षमता को कारणले मलाई सबैभन्दा मोहित गर्दछ।
JFF: जब देखि मैले एक बच्चा को रूप मा टाइपिंग कोर्स गरे मलाई हातले लेख्नु भन्दा धेरै टाइपि मन पर्योयसैले म सधैं कम्प्यूटर संग लेख्छु। सायद एक मात्र उन्माद यो हो कि जब उपन्यास लेख्दा मलाई त्यो मन पर्छ स्क्रिनमा भएको पाठ प्रकाशित पाठ जस्तै छ, त्यो हो, यसको इन्डेन्टेसनहरू, मार्जिनहरू, संवादहरूका लागि लामो ड्यासहरू, फन्टहरू, खाली ठाउँहरू, आदि।
JFF: म हुँ उल्लू र यदि म सक्छु म राती लेख्न रुचाउँछु। मेरो एउटा कुनामा छ अटारी घरबाट र सामान्यतया बानी र कार्यस्थल दुवै कायम राख्नुहोस्। तर मेरो अनुभवबाट म तिमीलाई भन्छु कि यदि त्यहाँ प्रेरणा छ भने तपाई उदास ग्यारेजमा र प्लास्टिकको कुर्सीमा बसेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, यदि त्यहाँ एक छैन वा तपाईं अवरुद्ध हुनुहुन्छ भने, तपाईं पहिले नै स्विस पहाडहरूमा चीलहरूको एक शानदार गुँडमा हुन सक्नुहुन्छ; एउटा पत्र बाहिर आउँदैन।
JFF: किनकी मलाई रुचिको कथाहरु हो, मँ चाहन्छु कि ती मा हुन्छ फरक अवधि र फरक तरिकामा (मध्ययुगीन महलमा होस्, आजको म्याड्रिडमा वा अन्तरिक्षमा)। मेरो जीवनको इन्जिन जिज्ञासा हो र यदि लेखकले यसलाई ममा जगाउन सक्यो भने, यात्रा जहाँ भए पनि सुखद हुनेछ।
साथै, कुनै पनि लेखक जस्तै, तपाईंले आफैलाई कागजात गर्नको लागि पढ्ने समय विभाजित गर्नुपर्छ, निबन्ध, लेख, आदि संग। कहिलेकाहीँ यो एक रोमाञ्चक जासूस काम हुन्छ।
JFF: मैले भर्खर एउटा विज्ञान कथा उपन्यास समाप्त गरें खोज, को कार्टरDamon र मैले ठूलो उत्साहका साथ सुरु गरें पुस्तक व्यापारी de लुइस जुइको। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, लिङ्ग परिवर्तनहरू चकित हुँदैछन्। मसँग पनि धेरै रोचक छ परीक्षण मध्यकालीन कला शीर्षक को बारे मा मंत्रमुग्ध तस्बिरहरू Alejandro गार्सिया Avilés द्वारा, मेरो जुनून को एक बुझ्न को लागी एक वास्तविक खोज: विश्वलाई मध्ययुगीन मानिसको रूपमा बुझ्न सक्षम हुन दिमागको अभ्यास गर्नुहोस्।
मेरो टाउकोमा बुलबुले भएका कथाहरूको लागि, धुवाँले अझै सफा गरेको छैन र म मेरो अर्को उपन्यास बारे केहि अनुमान गर्न सक्दिन। आशा छ म तपाईंलाई चाँडै बताउन सक्छु।
AL: तपाईलाई प्रकाशन दृश्य कस्तो लाग्छ?
JFF: निस्सन्देह हामी पूर्ण रूपमा छौं परिवर्तन प्रक्रिया र प्रतिमान पारी। डिजिटल पुस्तक को अतिरिक्त, फुर्सत को अन्य रूपहरु कि पढाइ को रूप मा एकै ठाउँ साझा साझा गरीएको छ, म सामाजिक सञ्जाल र स्ट्रिमि platforms प्लेटफर्म को सन्दर्भ गर्दै छु।
प्रकाशकहरूको प्रतिक्रियामा साहित्यिक अफर बढेको छ र हरेक महिना सयौं नयाँ विमोचन आउँछन्, धेरै साना सर्कुलेशन घाटाबाट बच्न। त्यो भन्नाले धेरै लेखकहरू प्रकाशित गर्ने अवसर छ, तर पुस्तकको यात्रा धेरै छोटो छ, केही हप्ता वा केही महिना मात्र, र परिणाम अक्सर खराब छ।
अर्कोतर्फ, पाठक को दृष्टिकोण तरीका अब धेरै धेरै किताब पसलहरु मा प्रदर्शित बरु नेटवर्क मा लेखक को जोखिम हो। मलाई लाग्छ कि सफलता सबैभन्दा ठूलो मिडिया उपस्थिति भएका लेखकहरूमा केन्द्रित छ।
यो सबै न त राम्रो छ न नराम्रो, यो एक परिवर्तन हो। इतिहास परिवर्तनहरूले भरिएको छ, सानो वा ठूलो स्तरमा, जसले कसैको लागि संकट र अरूको लागि अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
JFF: अरू सबैजस्तै, मैले पनि वास्तविकता हट्यो र अर्को प्रबल भएको महसुस गर्ने भावना भोगे। मलाई याद छ कि सुरुमा उसले मलाई भन्यो कि "त्यो हुनेछैन" वा "हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं", र त्यसपछि यो हुनेछ। कैद, खाली सडक, मृत्युको संख्या... जब तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ, यो बलियो छ।
मैले के भयो भनेर व्याख्या गर्छु ऐतिहासिक नाटक पहिलो व्यक्तिमा बस्यो, तर म स्वीकार्छु कि म निराश भावनाको साथ छोडिएको छु। मलाई थाहा छैन कि हामीले परिवर्तन गर्नको लागि यस ग्रहको वेक-अप कलको फाइदा लिन जाँदैछौं। आज हाम्रो वर्तमान मूल्यमान्यता र धेरै अहंकारको साथ अतीतलाई न्याय गर्न फैशनेबल छ। मलाई अचम्म लाग्छ, भविष्यमा उनीहरुले हामीलाई कसरी न्याय गर्ने?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » जुआन फ्रान्सिस्को फेरेन्डिज। पानी परीक्षण को लेखक संग साक्षात्कार
साहित्यमा 2021 नोबेल पुरस्कार भेट्नुहोस्